Sida loo isticmaalo iPhone in la Qaado qaadey Photos & Talooyin
Sida loo isticmaalo iPhone in la Qaado qaadey Photos
Human Development sawiro, ama kuwii qaaday in Mishiinkan Sare ee Range, stunningly waa sawiro qurux badan oo u oggolaan sawir in lagu soo qabto la joogo wakhtigii ammaantiisa oo ka sii weyn. Human Development sawir oggol yahay labadaba qaybaha dhalaalaya oo ka duwan in la si fiican loo bandhigi. Waa maxay dhaqan ahaan waxay dhacdaa marka qaadashada photos, gaar ahaan marka ay jiraan dhismayaal madow ka dhanka ah asalka ifaya, waa in dhismayaasha ay u muuqdaan kuwo doono ku dhowaad madow. Iyada oo ay tani u ekaan sida saamayn xiiso leh, waxaa laga yaabaa in aanu rabin marka qaadashada sawiro. Marka photos, waxaan rajeyneynaa in faahfaahinta labada meelaha dhalaalaya iyo hooskii imaanayn waxaa loo arki doonaa warqabaan qaraabo.
Qaadashada photos soo qaadey aad iPhone waxaa la samayn karaa in la isticmaalayo qaadey doorasho ku-app. Sababtoo ah baaxadda weyn ee faahfaahsan oo ku lug leh qaadashada sawir qaadey ah, inkastoo, waxaa muhiim ah in la xusuusto in ay wax yar ka dheer qaadan doonto in ay qaataan sawir qaadey ah ka badan hal aan soo qaadey. Maqaalkani waxa uu daboolayaa 2 qaybood, caawinta aad u tayo sare leh photos soo qaadey qaado aad iPhone:
Qaybta 1. Sida loo Daar qaadey in Camera on iPhone
Qaybta 2. Talo & Tricks Qaadashada Tayada soo qaadey High Photos
Waa in aad aragto shaashadda u eg marka geesgees u soo jeesteen;
Laga soo bilaabo halkan, waxaad yeelan doontaa labo ka mid ah fursadaha. Waxaad heli kartaa xirneeyn qeybiyaha ama on, Bilow. Tani waxay u ogolaaneysaa in aad si siman sida ugu qaybaha aad image muuqan dheelli; tusaale ahaan, ma laga yaabaa in aad rabto in aad boos aad u badan ku xeeran tirada dhexe ee aad image.
Waxa ka muhiimsan, waxaad awoodi doontaa in ay beddelaan on function soo qaadey ay ku camera aad. Tani waa meesha aad awood u yeelan doonaan in ay bilaabaan inay ku photos itnaa in images soo qaadey oo lagu yaqaan qaado. Si fudud ka jaftaa meesha uu ku leeyahay "qaadey Off" iyo in toggle fursad u heli doonaan in ay "Human Development Report On."
1) Tag Settings> Sawirrada> jeedo on fursad u dhig Photos caadiga ah:　Mararka qaar photos soo qaadey ma ka khayr badan kuwa caadiga ah. Taasi waa sababta aad u baahan tahay si ay u noqon on "Hayso Photos caadiga ah". Laga yaabaa in aad horey u soo xulay fursad u saaray soo qaadey On, horta maxaa dhaca waa in aad iPhone badbaadin doonaa sawiro saddex exposures kala duwan. Si aad sawiro "caadi ah" - sawiro la gaadhista ah in aan loo isticmaalaa in lagu arkaya marka aysan photos in hab qaadey - aad u baahan tahay si ay u tagaan goobaha iyo in la hubiyo in fursad u sii sawiro qaawan sida caadiga ah waa on. Marka aad leedahay set soo qaadey, waxaa sii joogi doonaa ilaa aad si maraan habka ee dib u beddelo si photos "caadi ah".
2) Tubada u soo bandhigaan Area Kahorowga ee Photo: Qof kasta oo dhawaan qaadday sanamyadii la iPhone ah ayay u badan tahay aqoon u leh ee "Tubada in ay diiradda saaraan" feature, laakiin waxa laga yaabaa in dad badan ma ogsoona in habkaani sidoo kale si toos ah u habaysaa gaadhista oo ka mid ah qayb ka mid ah sawir ah in diirada saaraya. By isticmaalayn "Tubada in ay diiradda saaraan" feature, users ayaa sidoo kale si toos ah u la qabsado gaadhista, gaar ahaan degaanka ee image la diiradda lagu saaray. Tani waxay ka caawisaa kor u shaqeynayaan qaadey on iPhone ka.
Users arki kartaa wax u eg image hoose marka la isticmaalayo "Tubada in ay diiradda saaraan."
3) Ogow Xuduudda ay iPhone soo qaadey: Xaqiiqada ah in iPhone hadda wuxuu khiyaar ah soo qaadey waa mid cajiib ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in iPhone waa xadidan oo ay ku xad in waxtarka leh oo loo isticmaalo si ikhtiyaar u soo qaadey. Tusaale ahaan, haddii aad ku xiran tahay inuu u dhaqaaqo, ama aad rabto in aad images la barbardhigo xoog, aad rabin in ay qaataan image la ikhtiyaarka ugu soo qaadey.
Haddii aad qaadato sida sawiro kala duwan oo sare oo firfircoon, waxa muhiim ah in ay ku dhaqmaan, dhaqanka, dhaqanka. Waxaa jira had iyo jeer qaar ka mid ah talooyin aad maskaxda ku hayso marka barbaran soo qaadey sawir:
Iska daaya: Ma aha oo kaliya waa in mawduuca sawirkaaga weli, laakiin waxa kale oo aad u baahan tahay si loo hubiyo in aad weli sii iPhone. Waxay qaadataa wax yar ka dheer si ay sawir qaadey ah ka badan sawir caadi ah, si xasilloon waa furaha.
Geesinimo: Raadi muuqaalka quruxda qorrax dhaca ama sunrise. Raadi mudista xiiso leh in xaaladood arag darnaayeen. Marka la soo koobo, waxyaalahaas sugaya in loo qabsado ishaada in aad laga yaabaa in aan ku fikiray qaadashada sawirada hore.
Dooro hal dhibic gaadhista ah: Sida hore loo sheegay, waxaad ka heli doontaa in aan kaliya ma "Tubada in ay diiradda saaraan" shaqada doorashada dhibic diiradda si gaar ah, waxa ay sidoo kale u shaqeeya oo muujinaysa sida la isugu dheelli aad gaadhista.
Ha ka cabsanina addoommada reer Chine kale soo qaadey: Apps sida ProHDR iyo iCamera soo qaadey ayaa labadoodaba laga heli karaa App Store oo si aad u wanaagsan u shaqeeyaan sugidda awoodaha soo qaadey aad iPhone.
Human Development sawir noqon karaa hab fiican oo aad siiso sawiro qurux badan aad rabto, iyo in iyagoo og inay iPhone leeyihiin awood qaadey in mar hore kaalmada gaarka ah ee kamaradaha Xararad, waxaynu noqon karaa sawir xirfad u isticmaalaya barnaamijyadooda soo qaadey iyo shaqeynayaan xaar ah oo ku saabsan iPhone.
Isticmaal iPhone sida Camera Security ah
Sida loo soo dhoofsadaan / inay iPhone ama iPad wareejiyo files vCard aad Si fudud
iPhone Aan ka jawaabaya: Siyaabaha dayactir Waxaa
Facebook Dhibaatooyinka App on iPhone: Hagaaji Them ee ilbiriqsi
Sida loo Copy iPhone Xiriirada in Computer la / aan Lugood
> Resource > iPhone > Sida loo isticmaalo iPhone in la Qaado qaadey Photos